38 Email Kushambadzira Zvikanganiso kuti Tarisa Usati Wadzvanya Send | Martech Zone
Pane tani yakawanda yekukanganisa iwe yaunogona kuita neyako yese email kushambadzira chirongwa… asi izvi infographic kubva kuemail Monks inotarisa pane izvo zvisirizvo zvikanganiso zvatinoita tisati tadzvanya tuma. Iwe uchaona akati wandei kutaurwa kwevamwe vedu pa 250ok pane dhizaini uye kuendesa mashandiro. Ngatisvetukirei mukati:
Tisati tatanga, isu takagadzirirwa kutadza kana kubudirira? Vatsigiri vedu pa 250ok Iva nemhinduro isinganzwisisike iyo inogona kukubatsira kuti utarise zvese nyaya maererano nezita reemail, kuburitswa, uye kuiswa kweinbox.
Dedicated IP - usarega kununurwa kwako kuchiparadzwa nemutumwa akaipa pane imwechete IP network yeemail service.
Inbox Kuiswa - shandisa inbox yekutarisa mhinduro kuti uone maemail ako haasi kungoendeswa kune junk folda, ivo vari kugadzira inbox.
Kununurwa - usasiye yakanaka email sevhisi kune yakashata uye uparadze kugona kwako.
Blacklists - ita shuwa kuti yako IP kero haisi pamutumidzi webhucha, kana zvikasadaro unogona kuwana kusabudirira kutakurika kana kuinbox kuiswa.
Domain - tumira kubva uye chengeta yakanaka email domain kuti iwe ugone kuvaka mukurumbira wako (pamwe neIP yako).
SPF - Sender Policy Sisitimu yekumisikidza inofanirwa saka ISPs inogona ISPs inogona kuratidza uye ichagamuchira maemail ako.
DKIM - DomainKeys Inozivikanwa Tsamba inobvumira sangano kutora mutoro weshoko riri kufamba.
DMARC - DMARC ndiyo yazvino yekusimbisa modhi yekupa ISPs nematurusi avanoda kuti email yako ipfuure.
Mhinduro Loops - ita shuwa kuti une mhinduro dzinozadzikiswa kuitira kuti ruzivo kubva kuISP rurege kudzokerwa kuESP yako yekuvandudza email.
Subscriber manejimendi chinhu chakakosha chikamu chine hutano chekushambadzira email.
Chirevo - usazviise iwe mudambudziko neIPs. Kumbira mvumo kune email.
Zvaunogona Kuchinja - ipa uye gadza tarisiro pane yakawandisa kune vako vanyoreri.
Zvisina kushanda - bvisa vanyoreri vasinganetsi kuti vadzikise kunyunyuta kusabvisa uye kushomeka kwekuita.
maitikiro - usasimudze iyo frequency yakakwira zvakanyanya zvekuti vanyoreri vako vasiye.
Segmentation - iwe wakanyatso tarisa kuverenga uye kunyatsoita chikamu chako?
Apa ndipo pane mari asi makambani mazhinji anoita zvimwe zvinokuvadza zvemukati zvemukati.
Dzinofinha nyaya mitsara - kana iwe uchida kuti mumwe munhu avhure, vape chikonzero! Buda ActiveCampaign's Subject Mutsetse jenareta rubatsiro.
Uchapupu - wakamboverenga here chinyorwa chako chegirama uye zviperengo? Zvakadii nezwi reizwi?
CTA dzakasimba - ita maCall-to-Action ako abude pane nhare kana desktop!
FNAME - kana iwe usina mazita evose vakanyoresa, usatarise kwavari! Kana shandisa pfungwa ku.
Unganidza Minda - edza yako yese data usati watumira imwe mapping uye zvine simba zvemukati zvinokumikidza iwe.
Mamiriro ezvinhu - bvunzo dzekumashure kune vese vatengi veemail… vazhinji havashandise.
Buttons - shandisa mifananidzo semabhatani kuitira kuti mabhatani ako aratidzike pane vese vatengi veemail.
Internationalization - urikushandisa marongero nemarongero akakodzera evanyoreri vako?
Typography - shandisa mafonti nekudonha-kumashure kune zvishandiso nevatengi vasingatsigire.
Social - une zvinongedzo kumaakaunzi enhau enhau kuitira kuti vanhu vagone kushamwaridzana nekutevera?
Vatsigiri vedu pa 250ok Iva nekutarisisa sarudzo yekutarisa yako email kune ese makuru email mutengi.
Snippet - edza iyo email kuti uone ako mashoma ekutanga mitsara mune yekutarisa email inomanikidza
alt - shandisa zvinomanikidza mamwe mavara nemifananidzo yese.
bvunzo - bvunzo yenyaya mitsara, zvinongedzo, maCTA, personalizaiton, chokwadi uye misiyano.
Zvinyore - mafonti madiki uye akavharidzirwa Asina kuzvinyorera anoita kuti ndidzivise kumboita bhizinesi newe.
Kuwedzera - shandisa makodhidhi marefu, akapatsanurwa maemail kuti utaridze hukuru nhare.
the retina - shandisa yakakwira resolution mifananidzo yakagadziridzwa kumeso ekuratidzira ayo anoshandiswa nemidziyo yeApple.
wirirana - ita shuwa kuti email yako inotaridzika zvakanaka pane nharembozha uye piritsi. Ungangoda kuwedzera zvipfeko, munguva pfupi!
Email Tumira macheki
Makanika eemail uye mashandiro ainoita kana asvika kubhokisi rako rekunyorera anogona kukanganisa kuvimbika kwako pamwe nekudzvanya-kuburikidza uye shanduko mitengo.
Kubva Kero - shandisa inozivikanwa 'Kubva Kero'
Pindura Kunyorera - nei uchishandisa noreply @ kana paine mikana yekubatanidza nekutengesa?
Trigger zvine musoro - ita shuwa kuti yako yekudonha mishandirapamwe inoitwa zvine musoro.
Links - wakamboedza zvese zvinongedzo muemail usati watumira kune vese vanyoresa?
Mapeji ekutumira - gadzira yakakwira shanduko yekumhara mapeji ane mashoma mafomu minda
Reporting - tora matanho, wongorora, uye nekuvandudza yako email kushambadzira kuedza.
kutevedzera - une ruzivo rwese rwakakodzera kuti uteedzere zviri pamutemo mutsoka dzako?
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Dhawunirodha ongororo yeemail Monks checklist yezvinhu zvekutarisa usati watumira. Iyo yakanaka shoma PDF! [/ Bhokisi]
Tags: dkimDMARCDomainKeys Inozivikanwa Tsambaemail makodhoniemail mamiriroemail mabhataniemail CTAsemail mafontiemail frequencyemail pasi roseemail sangana mindaemail mvumoemail retinaemail nyaya mitsaraemail kutsiva tamboemail kuedzaemail typographyemail inozvinyoraFNAMEmufananidzovasingashande vanyorimvumowiriranathe retinaspfmaCTA akasimbamvumo yekunyorerazvido zvekunyorerakutsiva tambo
Zenkit: Tarisira Mabasa Kumhiri Matimu, Midziyo uye Makambani
Bvumirana zvizere neiyi maemail ekushambadzira kukanganisa.
Ini zvakare ndinonzwa kuti aya ndiwo akajairika zvikanganiso zvinoitwa nevazhinji vevashambadzi veemail. Kutumira maemail nenyaya inofinha ndiyo yakajairika kukanganisa.
Ini handimbovhuri chero email isingakweve maziso angu. Ini ndinogara ndichifuratira kana kudzima maemail akadaro ipapo ipapo.
Vatengesi veemail vanofanirwa kunzwisisa kuti hapana anoda kutambisa nguva yavo mukuverenga maemail anofinha. Kana iwe uchinyatsoda kuvashandura saka unofanirwa kutumira maemail aine maziso anokwezva, anoyevedza uye anovimbisa mutsara wenyaya. Nekuti Ndiwo chete mutsara unoverengwa nevaverengi pekutanga.
Saka kuzvichengeta kunogona kuvandudza unyanzvi hwako.
Ndinofara kuti wakanyora ese makuru eemail ekushambadzira kukanganisa pano kuti isu tigone kudzidzidza uye tikwanise kuadzivisa. Tinokutendai nekugovana nesu. 😀